Weedho qurux badan oo Faransiis ah - Tusaalooyin Tattoo ah oo Fudud | Tattoo
Tusaalooyinka weedho qurux badan oo Faransiis ah oo loogu talagalay tattoos
Susana godoy | | Tattoos leh xarfo
Waxay u muuqataa in luuqaduhu ay ka mid yihiin saldhigyada waaweyn marka la dooranayo tattoo. Dhammaantood, Ingiriis iyo Faransiis ayaa sida caadiga ah ugu sarreeya liiska. Sidaas, haddii aan dhawaan aragnay ah weedho gaagaaban oo af ingiriisi ah, maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa cashar cusub oo luqadeed. Sidee ku raaxeysanayaa weedho faransiis qurux badan naqshadeyntaada soo socota?
In kastoo qaar badan oo inaga mid ahi doortaan Tattoos badan oo midab leh, oo leh walxo ama midab, maxaad u dooran weyday tusaalooyinka qaarkood kuwan oo kale? Shaki la'aan, fudeydka ereyada waxay leeyihiin astaan ​​qoto dheer. Hab wax badan loo dhaho, laakiin qaab aasaasi ah. Soo hel kuwan oo dhan tusaalooyinka tattoo!.
1 Tusaalooyinka weedho qurux badan oo Faransiis ah
1.1 Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah indhaha lama arki karo
1.2 Rajo yeelo
1.3 Tattoo jacayl
2 Oraahda ugu badan ee Faransiiska
Tusaalooyinka weedho qurux badan oo Faransiis ah
Sidaan dhahno, micno malahan luuqada, waa inaan rabno inaan muujino nafteena, inta aan ka cadeynayno waxa aan usameyn doonno. Mar kasta oo aynaan luqad si fiican u maamulin, waa inaan taas hubinno jumlad la xusho. Faa'iido badan maahan inaan u tagno turjumaan khadka tooska ah ku shaqeeya. In ka badan wax kasta maxaa yeelay mararka qaarkood waxaan heli karnaa weedho go'an oo aan lahayn macno isku mid ah oo tarjumaan qaabkani noo soo bandhigi karo. Marka, ma jiraan wax la mid ah inaad si fiican u hubiso ka hor ku dheji maqaarka.
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah indhaha lama arki karo
Mid ka mid ah weedho badankood la daawaday oo lagu sawiro, waa tan. Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah lama arki karo indhaha, waa mid ka mid ah weedho aad u qoto dheer oo leh astaan ​​weyn. Sababtoo ah ma ilaalin karno muuqaalada. Badanaa way khiyaameeyaan, dhammaan dhinacyada nolosha. Had iyo jeer way fiican tahay in si qoto dheer loo qodo. Kaliya halkaas, waxaan ka heli doonnaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah iyo aasaasiga. Miyaadan u malayn a weedh kaamil ah jirkaaga?.
Shaki la'aan, tattoos rajo leh ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee maqaarkayaga. Kaliya seddex erey oo kufiicnaan doona meelo badan oo jirka ah. Labada garab iyo xagga dambe ee dhabarka. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa qaabka font ee aad ugu jeceshahay oo aad ugu raaxeysan kartaa a Tattoo wanaagsan iyo dhiirigelin leh.
Xaaladdan oo kale, rajada jacaylku waa ta noo horseedda inaan tan tusno tattoo fiican. Naqshad cusub oo sidoo kale isku daraysa saddex eray, oo leh qaababka ugu cajaa'ibka badan waraaqaha dhexdeeda. In kasta oo aanu haysan wax kale oo dheeraad ah oo uu ku jiro khad madow, haddana quruxda ayaa ka sii muuqata. Shaki la'aan, mid ka mid ah mawduucyada waaweyn ee dhammaan noocyada tattoosku marwalba waa kuwa leh mawduucyo jacayl. Xaaladdan oo kale, uma baahnin wax ku daris ka badan erayada.
Oraahda ugu badan ee Faransiiska
Waxaa jira weedho badan oo sumcad weyn leh. In kasta oo midkeen kastoo ka mid ahi awoodaan oo ay tahay inuu doorto midka innaga qeexaya, haddana ma dhaawaceyso in la hubiyo inay ka mid tahay liiska aan adiga kuu xulnay
À coeur vaillant rien d´impossible: Ma jiraan wax aan macquul aheyn qalbi geesinimo leh.
Après la pluie le beau temps: Waa maxay sababta Duufaanta kadib, qorraxdu way soo baxdaa.
Chancun voit midi à sa porte: Mid kasta, tiisa gaarka ah.
Qui vit sans folie n´est pas si xikmadda qu´il croit: Qofka waalan bilaa caqli maleh sida uu isleeyahay.
Heureux au jeu malhereux in amour: Nasiib wanaag ciyaarta, nasiib darro jacayl.
Il n´ya pas de fumée sans feu: Qiiq ma jiro, dabna ma jiro.
Aussitôt dit, aussitôt fait: Waa la sheegay oo waa la qabtay.
Sida aad arki karto, waxaa jira weedho badan oo aad ku dooran karto naqshadaada xigta. Xigashooyin, fariimo jacayl ama dhiirigelin leh. Qeyb weyn oo kaamil ah oo qurxin doonta jirkaaga. Gacmaha, feeraha ama qaybta dhabarka, waxay noqon karaan meelo hagaagsan oo tan lagu xidho nooca weedho faransiiska quruxsan. Sideed u aragtaa fikradahan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tusaalooyinka weedho qurux badan oo Faransiis ah oo loogu talagalay tattoos
Tattoo-ka ku yaal baabacadda gacanta way libdhi oo way sii xumaataa
Tattoo tattoo on gacanta